भियतनामी र विदेशीहरूका लागि VIETNAMESE भाषा - भियतनामी व्यञ्जनहरू - सेक्सन3- भियतनाम अध्ययनको पवित्र भूमि
यो व्यंजनहरु भित्र हुन्छन् भियतनामी दायाँको फोनेटिक उच्चारणसँग भियतनामी ओर्थोग्राफीमा तल सूचीबद्ध गरिएको छ।
भियतनामी व्यञ्जनहरू (स्रोत: लाक भियतनाम कम्प्युटिंग कर्पोरेशन)
केही व्यंजन आवाज केवल एक अक्षरको साथ लेखिएका छन् (जस्तै "p"), अन्य व्यञ्जनका ध्वनिहरू दुई-पत्र disgrah संग लेखिएको छ (जस्तै "ph"), र अन्य एक भन्दा बढि अक्षरहरू वा डिग्राफको साथ लेखिएका छन् (भेलार स्टप "को रूपमा विभिन्न रूपमा लेखिएको छc","k", वा"q").
तलका तालिकाहरूले विस्तार देखाउँछन् र यसले तपाईंलाई बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ।
भियतनामी sव्यंजन व्युत्क्रम गर्नुहोस्
त्यहाँ छन् १ single एकल व्यञ्जनहरू तल सूचीबद्ध रूपमा:
भियतनामी एकल व्यञ्जनहरू (स्रोत: IRD नयाँ टेक)
भियतनामी व्यंजनहरु क्लस्टर
त्यहाँ छन् १ cons व्यंजन समूहहरू:
भियतनामी व्यंजन समूहहरू (स्रोत: लाक भियतनाम कम्प्युटिंग कर्पोरेशन)
Vआईटनेम अन्तिम व्यंजनहरु
त्यहाँ छन् Final अन्तिम व्यंजन:
भियतनामी अन्तिम व्यंजनहरु (स्रोत: IRN नयाँ टेक)
दुई ध्वनि - K & Kh, Ng र Ngh बीचको भिन्नता
यी बीच भिन्नता ल्याउन आवश्यक छ दुई आवाज:
"K"&"kh"ती दुई हुन् व्यंजन प्रतीक भियतनामी भाषामा। “K"फोर्टिज र अप्रभावित उत्पादन हुन्छ। यो "c"मा बिरालो, मा वियतनामी भाषा यो "जस्तै छc"र"q"। सायद एक धेरै प्रचलित शब्दहरू मध्ये सुरु भएको "k"हो"दुष्ट" त्यस्को मतलब "आइसक्रिम"र"kẹo" त्यस्को मतलब "कैंडी"। "Kh"लेनिस आवाज रहित dorsorelar spirant उत्पादन गर्दछ। सब भन्दा साधारण 'kh'शब्द'Khong" त्यस्को मतलब "no"वा"छैन"यद्यपि त्यहाँ छन् थोरै सामान्य अर्थ को रूपमा राम्रो। "Khỏe" त्यस्को मतलब "बलियो"र"स्वस्थ"अर्को सामान्य शब्द हो। राख्नु "khỏe không"व्यक्तिगत रिफर पछि अर्कोको स्वास्थ्यको बारेमा सोधपुछ गर्नु हो - शाब्दिक:"तिमी ठिक छौ?" जस्तै "b kn khỏe không?"साथै फास्ट फूडको पनि समयमा, सर्वव्यापी फ्रेंच फ्राईलाई चिनिन्छ"खोई tây chiên"अर्थ"आलु फ्राई"।
K र Kh बीच भिन्नता (स्रोत: ल्याक भियतनाम कम्प्युटिंग कर्पोरेशन)
एनजी र एनजी
त्यो आवाज ng र एनजीएच भित्र बनाउनु भियतनामी टाढाबाट छ कठिन आवाज पश्चिमीहरु बनाउन को लागी। Ng र एनजीएच केवल अन्तिम आवाज बनाउनुहोस् "राजा"वा"चालु"(जब सम्म तपाईं हार्ड बनाउन छैन /g/ अन्तमा आवाज)। जब समस्या उत्पन्न हुन्छ ng or एनजीएच एउटा शव्दको सुरूमा आउँनुहोस्, साझा पारिवारिक नामको रूपमा Nguyễn स्पष्ट प्रदर्शन गर्दछ। यहाँ, स्पिकरले /ŋ/ आवाज, जुन धेरै पश्चिमी शब्दकोशहरूले पनि उनीहरूको उच्चारण गाइडहरूमा पहिचान गर्दैनन्। (ती गर्छन /ng/.) यस पाठले तपाईंलाई कम्तिमा /ŋ/ एक स्वदेशी श्रोता को लागी राम्रो आवाज।
एउटा कुरा तपाईंले याद गर्नुपर्दछ यी माथिका व्यञ्जनहरूको संयोजन हो Ng/ एनजीएच स्वर संग। विस्तृतको लागि तल हेर्नुहोस्:
एनजी र एनघ बीचको भिन्नता (स्रोत: coviet.vn)
Ngh केवल स्वरहरू सँग जोड्न सकिन्छ जुन सुरु भयो i, e, ê.
Ng सुरु भएको स्वरसँग मिसाउन सकिन्छ a, o, ơ, ô, u, ư.
यसबाहेक, भियतनामी ध्वनीको अर्को जोडी छ (g/ gh) जुन सबैलाई /g/, यी व्यंजनहरूको लागि, त्यहाँ स्वरहरू सँग मिल्नेमा पनि नियम छ।
- gh केवल स्वरसँगै सुरु गर्न सकिन्छ सँग सुरु भयो e, ê, i.
- g स्वरको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ a, o, ơ, ô, u, ư.
* g संग पनि जान सक्छ i तर यस अवस्थामा यो सर्वनाम हुनेछ /j/, जस्तै cái gì.
(देखिएको 244 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 110
← VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूको लागि - सेक्सन 2
VIETNAMESE भाषा भियतनामी र विदेशीहरूका लागि - संवाद: GREETING - सेक्सन। →
टिप्पणीहरू बन्द फ्रान्सेली ओरिएंटलिस्ट - सेक्सन १
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 6,824
कुल भ्रमण: 78,641